Nageenyi gadheefi waraanni gaariin hinjiruNageenyi gadheefi waraanni gaariin hinjiru
Maalummaa, faayidaa nyaataafi dhugaatii isa beela'eefi dheebotetu beeka;hubatas. Kan uffataa ammoo isa daareefi qorraan gubatetu dafee hubata.
Kana ka'umsa godhachuun gara haala nageenyaa biyya keenyaatti yoo deebinu, biyyi keenya keessumaa eddii sirni Dargii kufuun sirni ammaa kun diriiree as waggoota kurnan lamaan darbaniif nageenyi ummatashii kan mirkanaa'e ture.
Kanas abbootiifi haadholiin keenya sirnoota duraan turan keessa haalli nageenyaa, jiruufi jireenyaa ummata biyyattii kan si'anaa wajjin tasumaa kan walhinmadaalle ta'uudha, kan ragaa bahan.
Biyya keenyatti yaada ofii ifatti ibsachuun, kan barbaadan deggaranii isa hinfeene ammoo ifatti balaaleffachuun haa hafuutii sammuudhuma ofii keessatti bilisaan yaaduunuu gonkumaa kan yaadamu hinturre.
Ummatoonni biyyattii cunqursaa suukanneessaa akkanaa keessa turan eddii mirgoota gara garaa heeraan mirkanaa'e gonfatanii bu'aasaas hanga tokko dhandhamuu eegalanii waggoonni lakkaa'amaniiru.
Bu'aa mirga gonfatameen dhamdhamamuu eegalame sun keessumaa waggoota afurii as dhimmoota adda addaa kanneen akka dhabamuu bulchiinsa gaarii, fayyadamummaa haqaqabeessa dhabuun, babal'ina sassaabdummaa kiraa, mirgoonniifi faayidaaleen heeraan mirkanaa'an sirnaan hojiirra ooluu dhabuufi kkf garanaa garasii ummata gumgumsiisuu eegale. Kunimmoo gara nageenya biyyattiifi ummatashii gaaffii keessa galchuuutti akka ce'u godheera.
Haalli nageenya biyyattii gaaffii keessa akka galu waantota taasisan keessaa kanneen irranatti eerre akkuma jiranitti ta'anii komii ummanni karaa seera qabeessaan waltajjiilee adda addaarratti dhiyeessaa tureef qaamni oggansaa sadarakaa sadarkaan jiruufi dhimmi kallattiin ilaallatu yeroon gurra kennuufii dhabuurraa kan maddeedha.
Dhimmi kun adeemsa keessa hidda yaafachaa deemuun yaaddoo nageenyaa ammaan tana mul'ataafi mudataa jiruuf ulaa bal'aa baneera.
Ta'us, gaaffiileen bulchiinsa gaariifi misoomaa ummatoonni biyyattii keessumaa dargaggoonni kaasaa turaniifi jiran dhawaataan deebii akka argataniifi furaman abdachaa waanti nageenya caalu akka hinjirre hubachuun kallattiifi gorsa oggantootasaa, abbootii amantii, abbootii Gadaa, jaarsolii biyyaafi hayyootaa hordofuufi dhaggeeffachuun mirkanaa'ina nageenyaatiif dhimma murteessaadha.
Keessumaa abbootiin amantiifi Gadaa lammiileen duudhaa jaalalaafi walii dhimmamuu waliin jiraachuusaanii caalaatti akka gabbifataniif gaheesaanii bahachuu qabu.
Ministeerri Dhimmoota Federaalaafi Horsiisee Bulaa tibbana akka ibsettis, abbootiin amantiifi hordoftoonnisaanii akkasumas qaamoleen dhimmamtootaa biroon haaluma kanaan duraatiin aadaafi seenaan walamanuu, wajjummaafi walkabajuu lammiilee caalaatti akka cimuuf xiyyeeffannaan hojjechuu qabu.
Mootummaanis hanqinootni hedduun akka jiran hubatee yaadotaafi gaaffiilee ummata biraa ka'aniif haala bilchinaafi gadifageenya qabuun deebii si'aayaa kennuun dhugoomuu nageenyaa keessatti shoorasaa bahachuu qaba.
Gaggeessummaan hubannoofi sodaa ummataa ykn ammoo kabaja yoo hinqabaatiin nageenya mirkaneessuu dabalatee adeemsa jiruufi jireenyaa keessatti rakkoo kan uumu ta’uun habannoo argachuu qaba.
Hayyuuleen, paartiileen mormitootaa, waldaaleen siivikii, kutaaleen hawaasaa gara garaa gama gamasaaniin dhimma nageenyaarratti yaada dhiyeessaa turan fudhatanii hojiirra oolchuunis dhimma daran murteessaadha.
Hawaasnis keessumaa dargaggoonni komiifi gaaffii qaban karaa qaroominaafi bilchina qabuun dhiyeeffachuu muuxaneeffachaa nageenya waaraa mirkaneessuu keessatti qoodasaanii bahachuu qabu.
Sochiin taasifamu kamuu haala adeemsa nageenyaa hingufachiisneefi duudhaa waliin jireenyaa ummatootaa hinmiineen raawwatamuu qabu.
Lammiin hundi nageenyi dhimma murteessaa akka qaroo ijaatti kunuunsaafi eegumsa onneerraa madde barbaadu waan ta'eef dhimma kanarratti cichanii hojjechuun murteessaadha.
Walumaagalatti bu'aafi maalummaa nageenyaa sirriitti hubachuuf biyyoota ollaa keenyaa kanneen akka Sudaan Kibbaafi Somaaliyaa darbees Yamaniifi Sooriyaafaa mil'achuun, “nageenyi gadheefi waraanni gaariin” akka hinjirre hubatamuu qaba.
Torban kana/This_Week 4307
Guyyaa mara/All_Days 1641902